चर्चामा अमेरिकी निर्वाचन : यस्तो छ, ट्रम्पप्रतिको मनोविज्ञान « Janata Samachar
चर्चामा अमेरिकी निर्वाचन : यस्तो छ, ट्रम्पप्रतिको मनोविज्ञान
प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०७७ आइतबार
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाइरहेका बेला विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा भने आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिय निर्वाचनबारे गम्भीर बहस आरम्भ भएको छ । यो पटक ३ नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अमेरिकाको राजनीतिक व्यवस्थामा मुख्य २ पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबीच नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित छ । राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका लागि रिपब्लिकनबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दोस्रो प्रमुख पार्टी डेमोक्रेट्स एक लिवरलबाट जो बाइडन उम्मेदवार बन्ने पक्कापक्की देखिएकाे छ ।
बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा ८ वर्ष उपराष्ट्रपति सम्हालेका जो बाइडन अमेरिकाका एक अनुभवी नेता मानिन्छन् । आफ्नो उमेरको सातौं दशक पुरा गरिसकेका ट्रम्प र बाइडनमध्ये बाइडनले जित हासिल गरे भने भने उनी पहिलो टर्ममा अमेरिकाकाे राष्ट्रपति बन्ने सबैभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति हुनेछन्। कोरोना महामारीको बेला हुन लागिरहेको निर्वाचन केवल राष्ट्रपति चुन्न मात्रै हुने त होइन ? भन्ने बहस पनि अमेरिकामा शुरु भएको छ । सबैको ध्यान ट्रम्प भर्सेस बाइडनको लडाइँ कस्तो होला ? भन्नेमा केन्द्रित हुन थालिसकेको छ । यो वर्ष सदनका सबै ४ सय ३५ सिट र ३३ सिनेटका लागि चुनाव हुनेछ।
यस्तो छ, ट्रम्पप्रतिको अमेरिकी मनोविज्ञान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति अमेरिकी जनता क्रमश: रुष्ट बन्ने क्रम बढिरहेको छ । यो कुरा रिपब्लिकन नेशन कन्भिन्शनबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ । पछिल्लो समय ट्रम्पका समर्थक पनि उनीबाट टाढिँदै गइरहेका छन् । पछिल्लो समय अमेरिकामा कोभिड -१९ लाई राम्ररी ‘ह्याण्डील’ गर्न नसकेको, कारोना नियन्त्रणको ट्रम्प नीति गलत रहेको र हरेक विषयमा अरुलाई दोष लगाउने उनको प्रवृत्तिबाट अमेरिकी जनता आजित भइरहेको देखिन्छ ।
यो वर्षको आरएनसीको ४ दिन नै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भाषण दिए । जबकी राष्ट्रपति चुनावका लागि मनोनित भएको उम्मेद्वारले कभिन्सनको अन्तिम दिन बोल्ने चलन छ । ट्रम्पका विभिन्न कमजोरीकै कारण डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडनले उनलाई ‘पपुलर भोट’ मा उछिन्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यतिमात्रै होइन, बाइडनले आफ्नो उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका लागि कमला ब्यारिसलाई मैदानमा उतारेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीले ‘ब्ल्याक अमेरिकन भोट बैंक’ लाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अनुमान गरिएकाे छ । डेमोक्रेट्स पहिलेदेखि नै अमेरिकी कंग्रेसमा पनि बहुमतमा छ। त्यसैले उसले यसलाई कायम राख्न पनि भरमग्दुर पर्यत्न गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी पुरानो राजनीतिक दल भएपनि पछिल्ला वर्षमा कम ट्याक्स, बन्दुक राख्ने अधिकार र प्रवासीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि कोरोना महामारीको नियन्त्रणको नीति तथा विभिन्न विवादित अभिव्यक्तिका कारण सरकारसहित पार्टी पनि विवादमा मुछिएको छ । यसैले यो पटकको अमेरिकी निर्वाचन जित्न स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको पार्टीका लागि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।